पञ्चपुरिमा बृहत महोत्सव हुने – Online Jagaran
२ चैत्र २०७५, शनिबार १५:१० March 16, 2019 जागरण
सुर्खेत, २ चैत(जागरण) ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालीकाको बाबियाचौरमा सञ्चालन हुने सांस्कृतिक महोत्सवमा सर्वा्धिक पुरस्कार राशिको भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
खुल्ला प्रतियोगीतामा बिजेताका लागि एक लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुस्कार प्रदान गरिने छ । यो कर्णाली प्रदेशमै भलिबलका लागी सर्बा्धिक पुरस्कार राशी भएको महोत्सब मुल आयोजक समितीका सचिब जगतराज ढकालले जानकारी दिए ।
“पश्चिम सुर्खेतको एकता, आजको आवश्यकता! कृषि पर्यटन संस्कृति तथा खेलकुद प्रवर्धनमा हाम्रो प्रतिबद्धता!!“भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना गर्न लागिएको महोत्सबमा करिब डेढ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा महोत्सबका बारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको जानकारी दिदैँ सचिब ढकालले ग्रामिण क्षेत्रमा नेतृत्व विकास र स्थानीय कृषि, पर्यटन र संस्कृति र खेलकुदको प्रवर्द्दन गर्नका लागि महोत्सबको आयोजना गरिएको बताए ।
करिब डेढ सय स्टल रहने मेलामा विभिन्न लघु, घरेलु , कृषी तथा पशुजन्य स्थानिय उत्पादनहरु समेत रहनेछन् । करिब ५४ लाखको खर्चको अनुमान गरिएको महोत्सबमा ५ करोड बराबरको कारोबार हुने आयोजकले अपेक्षा लिएको छ ।
कर्णाली रैबार 2075-12-02
बारेकोटका पहिरो पिडितलाई नगद राहत वितरण
१७ कार्तिक २०७७, सोमबार १२:४१ November 2, 2020 जागरण
कुष्टरोग प्रतिको बुझाई कर्णालीमा अझै पुरातन
१२ माघ २०७५, शनिबार ०६:५० January 26, 2019 जागरण